Ngaba kufanelekile ukuqesha i-Apple Music? | IPhone iindaba
Izizathu ndicinga ukuba iApple Music ibhetele kunokhuphiswano
UJuan Colilla | | IPhone iindaba, iTunes, Ezahlukeneyo
Ugxa wam uMiguel Hernández kutshanje wenze ungeniso lokwazisa uluvo lwakhe nokukhusela loo nto I-Apple Music ayingcono kunokhuphiswano kwaye ayizisi nto intsha kumculo womculo, inqaku elenziwe kakuhle kwaye njengomfundi ndilithande kakhulu, nangona kunjalo, nangona iinjongo zalo zizinzile (ubukhulu becala) ndiyahluka ngokomyalezo ophambili.
Ngokoluvo lwam iApple Music Ewe ingcono kunokhuphiswanoUbuncinci kwimbono yam kunye nemeko, kwaye kule migca ilandelayo ndiza kuzityhila izizathu zokuba ndikuthatha oku kuyinyani namhlanje kwaye yonke imihla edlulayo iya kuba njalo ngakumbi.
Kuyinyani kwaye akunakuphikwa ukuba iApple ayikaqali ngeyona ndlela ifanelekileyo ngalenkonzo intsha, zininzi izinto ebezinokwenziwa ngokwahlukileyo ukubetha ngamandla kwimarike kwaye ziphumelele ibhaso "lokuguqula ishishini lomculo" kwakhona, nangona kunjalo oku akuthethi ukuba iApple Music iye yasilela kude kude kube, namhlanje, kwimarike egcwele iindlela ezininzi ezinje ngeSpotify, iTidal, iSony Music, Dlala uMculo, umculo we-xbox (iGroove), iYouTube (ene-VEVO kunye neMicrosoft Key), Rdio, Napster, njl ...
Ukulungelelanisa ingxoxo-mpikiswano kakuhle, ndiza kuzama ukubhala inqaku ngezizathu ngamanqaku ahambelana nenqaku elidlulileyo:
1 Yintoni iApple Music
2 Abakhululekileyo kufuneka bafe
3 Iqonga elininzi? Eyam kuqala.
4 Undinika ntoni uMculo weApple?
Yintoni iApple Music
I-Apple Music sisithembiso, imveliso yokudityaniswa kweenkonzo ezahlukeneyo, iinkonzo esele zikhona kodwa zidityanisiwe kwaye zenziwa zalula zenza izinto zibe lula kuthi sonke.
Umculo: Inkonzo yomculo yokusasaza njengayo nayiphi na enye into, akukho nto intsha ngaphandle kokuba ineengoma ezingama-37 ezigidi kwikhathalogu yayo, izigidi ezisixhenxe ngaphezulu kwentshatsheli yangoku yeSpotify.
Xhuma: Ukuvuka kwakhona kwePing, kwaye apha enye yeentsika ezibuthathaka zale mveliso, iConnect ithembise ukuba ibhulorho phakathi kwamagcisa kunye nabalandeli, kunye nezixhobo kunye namandla ayo, yintoni engahambi kakuhle emva koko? Kukho izinto ezininzi, phakathi kwazo ezibaluleke kakhulu, ukusetyenziswa gwenxa ngamagcisa athe azikhawulela ekusebenziseni njengendawo yentengiso, imihla yokuxhoma, imifanekiso yokwazisa kunye nobunye ubuyatha obunetyhefu ibhulorho yobuqu ekufuneka ibekhona, ibhulorho eyi-Twitter Kodwa ayisiyiyo yonke loo nto, i-Connect ayisiyiyo kwaphela ukusilela, ukuba awundikholelwa, jonga indlela ukhuphiswano oluthathe ngayo iintsuku ezimbini ukukhupha umsebenzi ofanayo "wokulandela" amagcisa akho owathandayo, nkqu noShazam ukwenzile oko! Kwaye ngoku kukho ngaphezulu kwamaqonga ama-2 azama ngokufanayo kwaye alwela amagcisa, okwangoku alandela kuTwitter apho azinze khona. Ukuba endaweni yokuba bazizidenge kwaye bakopisane, babhidanise amagcisa, bonke basebenze kunye okanye bazikhawulela ekwenzeni eyona nto bayenzayo, ngokuqinisekileyo bonke baya kusebenza, uShazam aqonde iingoma, iTwitter ukukhuthaza kunye nokuQhagamshela.
I rediyo: I-Beats 1 "yimpumelelo", udliwanondlebe olusemgangathweni, amagcisa awaziwayo, usasazo ngqo ngalo lonke ixesha kunye nomculo ngaphandle kwemida, yintoni ekhoyo emva koko? Ukwenza ngokwezifiso, izikhululo ezahlukeneyo kwaye ayisiyiyo yonke imini yosasazo lweHip Hop, iRap kunye neCheerleader, nangona kufanele ukuba kuthiwe iBeats 1 iyiphumezile injongo yayo, ikhethekileyo kwiMTV, abaxhasi, ababhengezi abalungileyo, inayo yonke into, yiyo loo nto Ndiqinisekile ukuba uza kunyuka.
Abakhululekileyo kufuneka bafe
Sibuyela kwizenzo zikaGoogle noFacebook, kuninzi esele kuthethiwe kwaye kuyinyani, Xa ungayihlawuleli inkonzo, oko kudla ngokuba uyimvelisoKule meko, i-Spotify yeyona nto ikhuphisana nayo kwaye wonke umntu uya kubango lokuba bakhetha ukubhaliswa simahla, mnumzana, ingcinga encinci, ingoma kwiivenkile ezikwi-Intanethi ixabisa i-1,20, irekhodi evenkileni liku-15, ngo imilinganiselo ye- € 9 / ngenyanga Siza kubhatala amagcisa kwaye sibavuze ngomsebenzi wabo, kodwa hayi kubo, abona bantu badumileyo badla ngokuba nemali, kodwa kwiqela labo emva kwabo kwaye baqinisekisa ukuba ilizwi nobuso babo baguqulwa baba yimpumelelo yokwenyani, Kumawakawaka abantu abasebenza nzima emva kwengoma nganye befumana umvuzo oqhelekileyo, kwaye njengoko unokuqonda, abanakuphila ngokusekwe kwintengiso ngalo lonke ixesha le-X ngelixa sonwabela umsebenzi wabo simahla, otyhala iinkonzo ezisezantsi.
Imodeli yasimahla kufuneka iye ezantsi kwimbali kwaye iApple yenza kube lula, ngaba ungumntu onomdla? I- € 9 ngenyanga ziingoma ezisi-99, ngeli xabiso unezigidi ezingama-8 ngenyanga kwaye uyenyuka, naphina naphi na xa ufuna. Kodwa kukuba singabantu aba-37 ekhaya, kwaye iyonke iyi- € 5, kwaye sinezixhobo ezininzi…. I-Apple yenza kube lula, Nge- € 14 sine-99 ​​ilayisensi yosapho, isithembiso esipheleleyo esiza kunciphisa indleko zomntu ngamnye kwixabiso lesidlo sakusasa sebha, i- € 2, into enokuthi uninzi lwayo lukwazi ukuchitha, nangona kunjalo okuphumelelayo kukukhangela nangayiphi na indlela ukweqa intengiso yeSpotify okanye Iintengiso ezimbi eziginyayo ezingasiniki NALUTHI kwaye zichitha ixesha, kwaye ayisiyiyo loo nto, inguqulelo yeSpotify yeefowuni eziphathwayo iba mbi nangakumbi, ukuba unemvumelwano yasimahla, qiniseka ukuba nokuba uyithanda kangakanani ingoma, awuzukukwazi ukuyimamela, ukuba ufuna ukuva ingoma oyithandayo kuya kufuneka uye kwi-albhamu yayo kwaye udlale ngokungahleliwe kwi-albhamu leyo (ngokungqinelanayo ayiqhelekanga le uyikhangelayo), kwaye ukuba oko akwanelanga unenani eliqingqiweyo lokutsiba (yiya kwingoma elandelayo), nto leyo eyenza amava ashukumisayo oyike.
Iqonga elininzi? Eyam kuqala.
Sicinga ukuba iApple ayinyanzelekanga ukuba ibonelele ngenkonzo yayo kwamanye amaqonga, kufuneka siqwalasele lonto njengaye nawuphi na umntu okanye inkampani, abathengi bakho beza kuqala, ngesizathu esinye nangenxa yenkqubo eluhlaza, ngoku ukukhupha uguqulelo lweApple Music ye Android kunye neWindows kuya kuba sisidenge, Ngaba iya kuphuma? Ewe baziqhubele phambili ngokwabo, kodwa kuqala kubathengi bethu, abo bafuna kuphela ukuba uphawu lwethu luhlala lubonelela abo banyanisekileyo endlwini, kamva abanye, kodwa de inkonzo yethu ingafikeleli kumgangatho olindelweyo Ewe, asizukutyala ixesha kunye nemali ekwenzeni ukuba ifikelele kubasebenzisi abaninzi.
Esi sisimo sengqondo, ewe enye endivumayo ngayo, ukuba bangasungula isicelo se-Android kunye nesuti yeWindows iingxaki zinokuphindaphindeka, banomsebenzi ophambili wokucoca inkonzo kunye noMculo odityaniswe kwi-iOS, yonke into abanye banokuyilinda. Okwangoku, abasebenzisi beWindows banokusebenzisa inkqubo efanayo neMacs, I-Apple Music idityaniswe kwi-iTunes.
Undinika ntoni uMculo weApple?
I-Apple Music ibonelela abathengi bayo ngomnyango, nje ukuba inkonzo ingene kwisivumelwano, ilayibrari yomculo yesixhobo sethu ifikelela kumfanekiso we Iingoma ezingama-37 ezifumanekayoIsidenge, akunjalo? Ezi zibonelelo kwiinkalo ezininzi, sidityaniswa ngokugqibeleleyo nenkqubo, akufuneki siye kwiVenkile yeTunes ukuthenga ingoma esifuna ukuyimamela, okanye ukuvula usetyenziso lwethu ukukhuphela iividiyo zeYouTube kwaye sidlale ingoma ngasemva, okanye uvule i-Spotify ukuze ufumane ingoma njalo njalo, Sibiza uSiri kwaye sicela ingomaYinto elula nje, olu manyano luyinto eyomeleleyo ngokuxhasa iApple Music kangangokuba ingade ithathe isigqibo, singacela uSiri ukuba asidlalise umculo othandwayo wonyaka esiwufunayo, kwigcisa, kwialbhamu, unomathotholo, Zibeke kule meko, uyapheka okanye uthule ebhedini okanye kwikhompyuter, unesixhobo sakho se-iOS ecaleni kwaso sixhume amandla, ngokuthi "Hey Siri ..." kulandele "... dlala umculo weMetallica "okanye" ... dlala eyona ngoma idumileyo yonyaka ka-1995 ", le ngoma uyifunayo iya kuvakala, Spotify, ndiyakucela ukuba ujongeke njalo (kwaye ayifanelekanga ukuba ithi" kukuba i-iOS ayivulelekanga kwezo zinto " , nkqu nakwi-Android okanye kwiWindows okanye kwi-OS X yiSpotify ekwaziyo ukuyenza loo nto).
I-Apple Music njengoko benditshilo izihlandlo ezininzi ikhathalogu enkulu kuneSpotify (ukuba ayingoyena mkhulu kubo bonke abaviwa kwinkonzo yomculo esasazekayo) kunye neengoma ezizodwa, into abasebenzisi be-Apple abahlala beyithanda, ukuba basivuze ngokuchitha imali eninzi kwisixhobo (kungoko Ityala leenyanga ezi-3 ukuhlawula amagcisa). Kwaye enye enye, iinyanga ezi-3 zokuvavanywa simahla kwesigxina kunye nokuxhamla amagcisa ngengoma nganye edlalwayo, yiyo "ngokuzama ukuba ungalahli nto" ikhatshwa ngu "ukuba awuyithandi, yiyeke", ilungile wonke umntu, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokubuyela umva okanye ingxaki.
I-Spotify inabasebenzisi abazizigidi ezingama-70 kubo abangama-20 ngabasebenzisi beprimiyamu nkqu nama-60%, Bonke abo bantu bathengisa ixesha labo ngokutshintshela inkonzo embi kuba isebenza kuphela ngendlela eyamkelekileyo esuka kwikhompyuter, ngoku kuza iApple kwaye Ngenyanga enye fumana abasebenzisi ababhalisiweyo abazizigidi ezili-11Uninzi, akunjalo? Andizukuphika ukuba isiqingatha siyakushiya xa ulingo lwasimahla lweenyanga ezi-3 luphela, nangona kunjalo, ifuthe elikhulu kumzi mveliso libonakalisiwe, kodwa ayisiyiyo inkonzo epheleleyo yeApple, kanye ipolishiwe, isebenza njengoko kufanelekile kwaye ikhutshelwa amanye amaqonga, ndiqinisekile ukuba izakubamba okanye idlule inani labasebenzisi beprimotify, kwaye ukuba konke kuhamba kakuhle kwaye abantu baqiqa mhlawumbi nabasebenzisi beSpotify.
I-Apple Music inegumbi elininzi lokuphucula kwaye ayizi ngendlela eguqukayo, zizinto endivumelana ngokupheleleyo nomlingane wam uMiguel, nangona kunjalo ifike yomelele kwaye ilayishwe ngezithembiso ukunkqonkqoza etafileni ukuze kungabikho nguqulelo, kodwa lungisa ishishini lokusasaza umculo, apho yonke into yayichithakele kwaye kwahanjiswa impikiswano, phakathi kwamagcisa acela imali ethe kratya kunye neenkonzo ezinikezela ububanzi kubasebenzisi bazo, ekugqibeleni sonke sigqibe ukusebenzisa i-Spotify ekhaya kwaye sikhuphele iividiyo zika-YouTube xa besishiya, imeko ayizukuhlala ixesha elide, zombini ngenxa yokuziphatha, ezomthetho kunye nezizathu zoqoqosho, yiyo loo nto ndikholelwa ukuba iApple Music inokuba yinto eyahlukileyo, ngaphezulu kwako konke ukuba abasebenzisi kunye namagcisa ayasebenza, ukuba uqhagamshelo luphela ngoku luqhagamshela, ukuba abasebenzisi benza umzamo omncinci wokutshintshela kwinto echanekileyo yokuziphatha (nokuba iya kwiSpotify yeNkulumbuso, eyona nto ibalulekileyo kukuhlawulela inkonzo uyeke ukuba yimveliso), kwaye ukuba iApple ipholile I-Apple Music kwaye iyishiyile kulindelo lwakho ukuba sele ikhutshelwe i-Android, ezi nyaniso zilula ziya kutshintsha ishishini lomculo njengoko sisazi kwaye sinike umgangatho ophucukileyo weenkonzo kunye nomzi mveliso onemveliso ngakumbi ngokufumana inzuzo ngokulinganayo.
Inkonzo yoMculo we-Apple mvanje, yiyo loo nto Ndinika ivoti yam yokuzithemba, isekwe kusetyenziso ebendilinika i-beta kawonke-wonke ye-iOS 9, iyahlangabezana nolindelo lwam olusisiseko lokutshintsha i-Spotify, umculo owufunayo xa ufuna nalapho ufuna khona, ngexabiso elifanayo, kunye nexesha elingakumbi lokuzama ngokudityaniswa okungenakuthelekiswa nantoNgezi zizathu zodwa, sele ndingumsebenzisi weApple Music kwaye Ndiceba ukuqhubeka ndiyiloo nto xa uvavanyo luphelaNgoku ku-Apple kunye nabazobi ukuba benze intshukumo kwaye bazise unxibelelwano ebomini, ngaphandle kokulibala ukundivumela ukuba ndifumane umculo omtsha, ngoku ophumeleleyo yi-Beats 1 kuphela kwaye ndinethemba lokuba icandelo le "For you" liza kwenza kungekudala.
Ndingathanda wena, bobabini abakunye nam kunye nabo bangekhoyo, ukuba banike izimvo malunga nale nto kunye neposi echaseneyo uluvo lwakho malunga nenkonzo kunye neengxoxo ezinikwe ngumntu ngamnye kuthi, uluvo lwakho lubalulekile njengolwethu kwaye siya kukuvuyela ukuzifunda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » iTunes » Izizathu ndicinga ukuba iApple Music ibhetele kunokhuphiswano
Ndikunye nawe Juan, andikhange ndiyithande ingxaki ngaphambili, kodwa ndizamile iveki kwaye ndiyayithanda kakhulu.
Andinalo ikhadi lamatyala ngoko ke andinako ukuhlawula umrhumo… kwaye ndingathanda ..
Ndicinga ukuba iApple Music izakubangcono kuneSpotify, qaphela ukuba iApple Music ayinanto ... yiyo loo nto kukho iimpazamo zokuqala, kodwa kancinci kancinci iya kuphucula !!!
Umlilo obandayo sitsho
Phendula kuMlilo oBandayo
Ndingumthengi kunye nomsebenzisi weApple iminyaka emininzi, kodwa ukuba nenjongo andivumelani neninzi yezinto ezivezwe kwesi sithuba. I-Spotify iphezulu kakhulu okwangoku kwaye andiyithandi kwaphela i-Apple Music, ubuncinci kwinyanga enesiqingatha bendiyisebenzisa. Xa unesoftware yomculo efakwe kwi-OS yakho ngokungagqibekanga kwaye ukhetha okanye ugqibe ukusebenzisa usetyenziso lomntu wesithathu, luphawu olubi, ilula kanjalo. Ukuba iapile icinga ukuba usetyenziso lwayo luphakame kakhulu baphosakele kakhulu kwaye ndingu-100% njengokuba amaxesha olingo ephela bayakufumana idosi elungileyo yokwenyani.
Ngokunyaniseka, kubonakala ngathi kukuphanga kum, undibiza ngendala kodwa okwangoku ndisamamele umculo wam kwi-IPOD yam, kwaye nakumatyala athile ndisebenzisa indawo yasimahla. Kubonakala ngathi kukuphanga abandihlawulisayo ngokumamela umculo ukuba nako ukuphatha okwakho kwakwisixhobo esinye.
Kwaye "eyakho", uyithengile? Okanye ngaba uyikhuphele? Ngenxa yoluhlobo lwamagqabaza owafakileyo, ndiqinisekile ukuba uyikhuphele phantsi, ke ayisiyo "eyakho", nantsi le ibayo nguwe kwaye hayi OHLAWULAYO ​​ngokusasazwa okusemthethweni service, kuya kufuneka ucinge ngaphambi kokuba uthethe.
Inqaku linomdla, kwaye ngokunxulumene namaxabiso kukho ama-5 kusapho lwam ndihlawula umrhumo kwaye ndihlala eMelika kwaye into enomdla kukuba zii-US $ 6.99 kusapho ngalunye lwe-6 yokonga ibalulekile kuba ndinomntwana ofikisayo owisa naliphi na inani lomculo.
Kuyamangalisa ukuthi "simahla kufuneka sife" xa iApple inganikanga ngeyodwa, kodwa iinyanga ezintathu zomxholo wasimahla.
Kukho ubuxoki obuninzi malunga neApple Music, umzekelo ukuba inekhathalogu ebanzi (eneneni yiXbox Music enezigidi ezingama-40) okanye eyona mgangatho uphezulu (akukho nto ibetha iTidal kunye ne-1441 kbps yayo).
Ingxaki yindlela eyenziwe ngayo inkonzo. Kwaye ayijolisanga kubantu abathanda ukubaleka (njengeSpotify) okanye abathandi bomculo (iTidal) ngokulula nangokulula kubalandeli beApple abafuna ukumamela into.
Ngelixa abo bakhuphisana nabo bangena kuwo onke amaqonga eemoto, iithiyetha zasekhaya kunye neeTV ezikrelekrele, iApple izilinganisele kuphela kwintengiso yayo (efanayo apho okhuphisana nayo bakhona).
Ukuba uza kwenza isonka, awuthengisi nje kummelwane wakho; uyithengisa kuyo yonke idolophu.
Kuya kufuneka ubengumntu othanda kakhulu ukubhala eli nqaku (Kwaye fanboy ikuxelela).
Andikunikanga veki, kodwa inyanga yovavanyo kwaye nangona inezinto eziyifunayo, kusafuneka iphucule izinto ezininzi, kwaye kulindelekile ukuthi ngalo mzuzu ukuba le nto inikwa yiApple ingcono.
Ukusetyenziswa kwedatha: Spotify ngaphandle kweintanethi, ukuba kwaye kuphela ukuba, ikuvumela ukuba udlale kuphela into ekhutshelweyo. I-Apple Music (kwaye oku kungumgaqo-nkqubo we-Apple, ndiyathandabuza ukuba izakutshintsha), kuba uvula iApp, itya idatha. Esi sisihloko seSpotify, kuba ndinaso kwi-iPod yam kwaye ndiyisebenzise ngaphandle kwengxaki okanye ukusetyenziswa kwedatha.
- Ikhathalogu enkulu kunazo zonke: obu bubuxoki obukhulu benkulungwane, iiKhathalogu zeApple Music zingummandla kwaye lo ngumcimbi wezomthetho. Ndifumene amacwecwe ngamagcisa angaphelelanga kumculo weApple kwaye ukuba akwiSpotify. Umzekelo, uNach, ndisePanama kwaye ngenxa yokuba ndivela eSpain, undinika kuphela idiski e-USA, ngelixa ekwiSpotify, yonke into iyafumaneka.
- Uluhlu lokudlalwayo lweTunes: Ngaba kuya kufuneka ndichaze ukubulawa ngenxa yokudala uluhlu lokudlala oluvela kwi-iTunes? Utolo oluncinci oluhlaza olubonisa ukuba loluphi uluhlu lwakho kwimowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi kwaye ayisiyiyo indibaniselwano ekugcina ungangenisi uluhlu ngoluhlu olumele ukusetyenziswa kwedatha.
-Umnqamlezo: ucotha kakhulu.
-Siri: masithethe ngokungagungqi, ukuba se-ofisini, nee-headphone, uyamsebenzisa uSiri ukukhangela ingoma? okanye kwindlela engaphantsi okanye kwivenkile? Mhlawumbi emotweni yakho okanye ekhayeni lakho, kodwa hayi kuyo yonke indawo.
- Qhagamshela: Ukwazi ukuthumela ukubetha kwe-elektroniki kwi-iPhone yam, i-iPod, i-iPad, iMac, njl njl. I-Apple Music ayinalo olu phawu. Kwaye kum yinto endiyisebenzisa mihla le. Ukongeza, ayixhomekekanga ekubeni kwinethiwekhi efanayo.
Ngayo yonke le nto, anditsho ukuba iApple Music ayinakamva. Ngokuchasene noko, inezinto ezininzi ezinokubakho, kodwa ukutsho ngoku ukuba ingaphezulu yifani yethanda.
Ndicinga ukuba eli nqaku alinanjongo, okanye ubuncinci alicacanga.
Nangona kunjalo, ndikhetha iApple Music, kwelinye icala ngenxa yokudityaniswa okucacileyo kunye neemveliso ngakumbi kwilayibrari yam apho ndinazo ezo zinto zingenaqonga, kodwa into endiqinisekisileyo luluhlu kunye neengcebiso. Ngamanye amaxesha andazi ukuba ndimamele ntoni, kwaye jonga nje ukufumana into entsha, okanye icwecwe elincinci elilibalekileyo. KwiSpotify bendizokuyeka, bendizakukhetha irediyo esekwe kwingoma, ndifumanise ukuba isiqingatha seengoma besivela kwiqela elinye. Oku akwenzekanga kum kwiApple Music.
Kodwa lelo lityala lam, ayisiyiyo yonke into egqibeleleyo, abanye abantu banokukhetha ukudityaniswa kweMusicXMatch kunye neSpotify ukucula, okanye ukufumana iidiski ezithile kwindawo ebonakalayo, okanye ukusebenzisa ithuba lesandi seTidal, ngamafutshane.
H9JA79JAWJTE iinyanga ezi-4 zasimahla zomculo weapile onekhowudi
UJorge M. sitsho
Ndikhe ndangumsebenzisi ophambili weSpotify ixesha elithile. Ndirhoxisile ndatshintshela kwiApple Music… kwaye ndicinga ukuba ndiza kubuyela eSpotify. Ndiyayithanda iApple kunye neemveliso zayo, kodwa xa kuziwa ekusasazeni umculo ndisazibona ziluhlaza. Mhlawumbi ekuhambeni kwexesha iya kulingana okanye igqithe iSpotify, okwangoku kwaye ukuba kuya kufuneka uhlawule, ndikhetha eyona ilungileyo. Ukubulisa.
Phendula kuJorge M.
Molo, ngokunyanisekileyo ndicinga ukuba ayisiyiyo into yokuba ngumthandi.
Kutheni singajongi izibonelelo kunye namaxabiso?
Sithetha ukuba sele sivavanya le nkonzo kwinyanga e-1. Kwaye ngokunyanisekileyo kum ukucinga kuyamangalisa. Bayadibanisa yonke imihla kwaye kancinci kancinci amagcisa kwaye inkonzo yabo yomculo iyaphucuka suku ngalunye lokudlula.
Ndinosapho lwam luphela lubhalise kwiApple Music nge- € 14,99 ngenyanga
Ekupheleni kosuku ayisiyo mali ingako .. Ukuze ndibone kwaye ndicinge ziirandi ezi-3 zebhiya ezinabahlobo aba-5 ..
URommel Bengochea Abad sitsho
I-Spotify ineminyaka emi-6 okanye esi-7. Umculo we-Apple usisiqalo nje.Ngokucacileyo, kufuneka ipolishwe ngakumbi, kodwa intle
Phendula Rommel Bengochea Abad
Ke ukuba uthi ungumntu othanda uluvo ngokunika uluvo lwakhe ... ke uyintoni? Amakhosi ??
Kungenxa yokuba ndicinga ukuba ningama-fanboys akhusela indawo, ukuba uyaqonda ukuba iApple Music ithatha inyanga, kwaye iseluhlaza, yiyo loo nto kufuneka uyinike ixesha !!!
Unganika uluvo lwakho ungatshongo ukuba ungumntu othanda umfana, uzamile omabini amaqonga, kwaye ndiyithandile ngakumbi iApple Music kwizinto andinika zona nosapho lwakhe, endiqondayo ...
Kudala ndisebenzisa iApple Music ukusukela ngala mhla wokuqala (bendikade ndingumsebenzisi wePremotify Premium) kwaye ndifunda ezinye izimvo kubonakala ngathi sisebenzisa enye inkonzo.
Khange ndibenangxaki ngaphandle kwamakhulu adweliswe apha, ngokuchaseneyo. Ukudityaniswa kweSiri, eyinto endiyixabisileyo, kugqibelele. Ndicinga ukuba izakuphela iza kuSpotify, kodwa namhlanje ayinayo. Ndiyithandile iBeats 1 ukusukela ngosuku lokuqala, kwaye nangona kuyinyani ukuba ezinye ii-DJs ziphosa kakhulu ihip-hop, rap, njl, kukho iinkqubo ezinje ngeSt Vincent okanye uSir Elton John ezibalaseleyo.
Kucacile ukuba nganye iya kuxabisa izinto ezahlukeneyo, kwaye izinto eziphambili ngokubaluleka zahlukile, kodwa andiqondi ukuba eli phulo lenziwe kwiiforamu zomculo weapile. Ukufezekisa ukuba ukhetha iSpotify, mna, namhlanje kunye nayo yonke into eluhlaza, sele nditshintshele kwiApple Music, kwaye ngoSeptemba ndiza kuhlawula i-10 yeedola.
Ungayithoba njani i-iOS 8.4.1 ukuya kwi-iOS 8.4